Antarctic Krill Oil Omega-3 Complex - Megafit Nutrition
Home Shop Antarctic Krill Oil Omega-3 Complex
အမျိုးအမည်နံပါတ : 000-10.
အမျိုးအစားများ: Krill Oil, Omega-3, ငါးကြီးဆီနှင့် Omegas.
EPA/DHA Omega 3,6နှင့်9တို့ဖြင့် ပြည့်ဝစေသည်
krill oil မှ ရရှိသော မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် အဆီဓာတ်များ
နှလုံး၊ ဦးနှောက်နှင့် အဆစ်အမြစ်ကျန်းမာရေးကို ထောက်ပံ့ပေးသည်
အရေအတွက် : 60 /120
ဆေးညွန်း : 500 မီလီဂရမ်
Antarctic Krill Oil for MegaFit Nutrition can help lower blood pressure and cholesterol, support optimal brain health, and reduce inflammation in the body. Our non-GMO formula contains all the Essential fatty acids. Our Premium Krill Oil is stable, free of PCB’s and heavy metals.